Wareejinta Hagaha. Ku xadgudubka WPA iyo WPA2 si deg deg ah. | Laga soo bilaabo Linux
Wareejinta Hagaha. Ku xadgudubka WPA iyo WPA2 si deg deg ah.
@Jlcmux | | GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
KU DUL QAAD DUGSIGA DIB U DHAWRKA 5 R3 WEP, WPA IYO WPA2 NETWORKS LA LEH WAND STANDARD ROUTER.
Nidaamka WPS wuxuu ku guuldareystaa mid ka mid ah qaababka uu jaangooyuhu leeyahay marka lagu daro qalab cusub shabakadeena WiFi, gaar ahaan kan isticmaala nambarka PIN, maaddaama macmiilka isku dayaya inuu ku xirnaado shabakadda uu soo diri karo lambar kasta oo PIN ah oo ka kooban 8 lambar iyo haddii kuma habboona barta barta laga soo galo, waxay muujineysaa qaladka laakiin waxaa la ogaaday in dirista kaliya 4-ta lambar ee ugu horreysa jawaab laga helo. Marka, tirada fursadaha si loo ogaado tirada ayaa ka soo dhacaysa 100 milyan oo isku dhaf ah oo aan ka yarayn 11.000, markaa waa arrin lagu gaarayo iyada oo weerar xoog leh lagu qaado saacado gudahood.
Ugu horreyntii waxaan aragnaa qalabyada shabakadaha jira.
Habka kormeerka waa la awoodsiiyay.
Amar airmon-ng bilow wlan0, isdhexgalka mon0 waa in la awoodsiiyaa, kaas oo ah midka lagu bilaabi doono weerarka reaver.
Jaantusyada jaantus 1 iyo 2 ..
Waxaan hubinnaa shabakadaha leh furaha WPS ee la weerari karo (la soco haddii aad amarka siineyso ma jiro shabakad soo muuqata, waxay ka dhigan tahay inaysan jirin shabakado leh astaamahan aagga).
Amar maydh -i mon0
TALAABADA 4AAD IYO DAMBE.
Waxaan bilownay weerarkeena, oo aan ku xirneyn baakado sida kuwii hore oo kale, waa biinanka, nidaamku wuxuu tijaabiyaa dhammaan isku dhafka suurtagalka ah ee koox ka kooban 8 lambar (xusuusnow shabakadaha lagu xadgudbay pin-ka wuxuu ahaa 12345670) haddii ay dhacdo mid kale iskudarka waxay qaadataa 1-2 saacadood) waxaad u baahan tahay inaad gasho furaha.
Amar reaver -i mon0 -b (bssid) -c (kanaal) -vv
sidee u arki kartaa biinanka waa 12345670
furena waa 364137324339… NETWORKNA WPA.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Wareejinta Hagaha. Ku xadgudubka WPA iyo WPA2 si deg deg ah.
Hal sabab oo kale oo loo isticmaalo BackTrack.
Hagaag, faallooyinkaasi waa waxoogaa meesha ka baxsan ... wixii distro ah waa la waafajin karaa si ay u adeegsadaan aaladaha lagama maarmaanka u ah tan iyo wixii intaa ka badan ... waxay kugu filnaan lahayd inaad joojiso inaad ahaato lakab yar 8
Ku jawaab freebsdick
Wax walboo disto ah ayaa loo isticmaali karaa, laakiin si daacadnimo ah waxay umuuqataa wax lagu qoslo in qoraalo ku saabsan sida loo sameeyo la daabaco, maxaa yeelay waxaan horey u ognahay in dadka intiisa badan, markay akhriyaan qoraalladan, u adeegsadaan inay wifi ka xadaan deriskooda xDDD ..., ka dibna qaar baa la yaabi doona sababta aan mar dambe u isticmaalin wifi waxaanna internetka ugu gudbineynaa PLC'S XD
Waan ku raacsanahay. Xatooyada Wifi waxay ila tahay inay tahay mid ka mid ah falalka foosha xun ee saynisyahan kumbuyuutar ah uu sameyn karo.Tani waa hage loogu talagalay dadka qashin qubka ah.
ps tag internet-kii hore ee siligga ahaa xanaaqaaguna wuu dhamaan doonaa, ps hadii wax wadada yaalaan oo laptop-kaygu ogaado oo waxaan u malaynayaa lambarkaaga sirta ah uma malaynayo in wax dambi ah la galay
Gawaarida jr dijo
Isla mar ahaantaana waan oggolahay, laakiin dad badan ayaa leh internetka kaliya maxaa yeelay waxaa ku jira xirmada oo iyagu wax fikrad ah kama lihi waxa loogu talagalay, waxaanan u maleynayaa inta aad ku xirmeyso adigoon si xun u isticmaalin ama u dhaawicin dadka kale, waa inaysan noqon dhibaato.
Jawaab Carls jr
Looma baahna in la isticmaalo PLCs 🙂
Waxyaabahaasi waxay u dhacaan inay kiciyaan waxyaabo aan loo baahnayn iyo in mudnaanta ay u muuqato mid aad u fiican.
Aniga shaqsiyan waligey dhaqaajin maayo wax taas (sida haddii miyir-qabkayga uu iiga digay) ay iga dhigeyso inaan ka shakiyo nuglaanta.
Tusaale ahaan, marka laga hadlayo Wi-Fi, waan ogahay in wps uu aad ugu habboon yahay, laakiin marwalba waan joojiyaa markii ugu horreysay ee aan marin u helo router-kayga. Aniga ahaan in ay ku xidhaan iyaga oo aan waxba waydiisan xaqiiqda kaliya ee riixista badhanka mar horeba iga xanaaqay. Waxay lamid tahay nuglaanta sudo, marba marka kadambeysa waxbaa umuuqda oo sare usii qaadaya mudnaanta umana baahna in qofna igula taliyo amaanka, waa macquul macquul. Haddii aad kordhiso mudnaanta, waxay u badan tahay inaad nugul tahay. Xaqiiqdii, weligay ma habaynin sudo waligayna ma qaban doono.
Marka la soo koobo, aniga ahaan, raaxo kasta oo ii oggolaaneysa inaan sameeyo wax la dhaafayo tallaabooyinka amniga aniga ayaa ah sabab ku filan inaan ka shakiyo isticmaalkiisa sidaa darteedna, haddii ay suurtagal tahay, waxay mar hore igu kalliftay inaan barkinta ka saaro Raaxo-darrada qaar ayaa ka wanaagsan albaabka albaabkiisa laga furayo qof aan garanayn.
Waa inaan u adeegsadaa plc's, si fudud maxaa yeelay ma isticmaali karo vpa, router-ka, sababo jira awgood routerkeygu wuu laalaadaa haddii aan isticmaalo wpa iyo mid ka mid ah 3 USB adab wifi adapters, oo aan ku isticmaalo Linux, haddii aan ku isticmaalo daaqadaha waxba kama dhacaan ... in Linux waxaan ku qasbay inaan isticmaalo wep ... iyo dabcan. Dhamaanteen waan ognahay sida ay u fududahay jabinta fure wep, maalin walbana in ka badan kumanaan qoraalo ayaa dadka ku dhiirrigeliya inay waxyaalahaas sameeyaan.
Aakhirkii waxay ahayd inaan doorto inaan qarash gareeyo 50 euro, oo aan isticmaalo 3 plc iyo dhibaatadii la dhammeeyay. Maxaa xigi doona? Bar sida loo sameeyo god derbiga deriskiisa oo internetka looga xado khadka korontada? xd
Maxaa jira si loo akhriyo. Markaa haddii ay daabacayaan buug ku saabsan sida loo xiirayo mandiil, ma waxay u daabacayaan dadka inay waddada ka xadaan?
Immisa wax aan jirin, fadlan.
Iyo @ pandev92, miyaad qarashgareysaa lacagta aad ku iibsaneyso PLCs oo aadan lacagta ugu isticmaalin router hagaagsan, oo leh talaabooyin amni oo kugu filan? Khibrad ahaan, waa la ogyahay in PLCs ay bixiyaan waxqabad ka yar kan Wifi N, gaar ahaan haddii rakibaadda korontadu ay duqowday ama gaabis tahay.
Gurigeygu waa dhisme cusub, tan kale waa inaan isticmaalo oranji oo aan raadiyo router leh ip ip, ma aha wax fudud, haddii aan helona, ​​wax fikrad ah kama haysto sida loo qaabeeyo si aan codka u gudbiyo.
marka loo eego annubis, faalladaada ku saabsan mindi minta ma ahan mid gebi ahaanba sax ah, kiiskan waxaa la barbar dhigi karaa: »buug-gacmeed lagu ogaanayo sida loo mindiyo qof» xD
Nasiib darrose, waxaa jira dad yar oo yaqaana aaladaha loo adeegsado soo gelida sida Backtrack, oo aan u adeegin oo keliya in la xado WiFi-ga deriska, laakiin sidoo kale in la helo xog-ururin amni daciif ah iyo dabcan, inay weerarada DDoS ka qaadaan qaab wax ku ool ah.
BackTrack wuxuu had iyo jeer umuuqan doonaa sida loo yaqaan 'GNU / Linux distro' oo leh utility si uu awood ugu yeesho inuu sameeyo waxaas oo kale, in kasta oo adeegsigiisa ugu caansan uu yahay in la xado WiFi sidii aan horay u soo sheegay.
Hal su'aal: Oo haddii shabakadu leedahay filter IP ah, sidee baan ku ogaan karaa inay leedahay shaandhada noocaas ah iyo sidee loogu xadgudbi karaa?
Waxaan u maleynayaa inaad u jeeddo haddii routerku leeyahay karti-siinta MAC karti (ma aha IP-yada). Xaaladdan "mala-awaal" ah, waxa ay tahay inaad sameyso ayaa ah, adigoo adeegsanaya aaladaha iskaanka iskaanka ah ee shabakadda, sug ilaa intaad ka helayso macmiil la oggol yahay oo ku xiran AP, ka dib markaa waa inaad nuqul ka sameysaa MAC-ga macmiilka la yiri si aad ugu dhejiso kaarkaaga shabakadda macnaheedu waa aalad sida AJA Charger ama wax la mid ah, taas oo ah, u beddel MAC kaarkaaga ka mid ah kan macmiilka ah ee karti u leh inuu ku biiro
Halkaas talaabooyinku durba way madoobaanayaan, maaddaama "mala-awaal ahaan" aad gasho router-ka si aad ugu darto MAC-kaaga asalka ah, ama aad uga saarto shaandhadaas, iwm, iwm, laakiin xisaabta ku darso in sida caadiga ah dadku aysan inta badan awood u siinaynin ikhtiyaarkaan ah inaad ku sifeeyaan waa inay u qaadataa in haddii ay sameeyeen ay ugu wacan tahay in yar oo ay yaqaanaan sida loo galo router-ka oo wax loo habeeyo, markaa fursadaha ay ku ogaan karaan buufinta ayaa aad u sarreeya.
Hagaag, waxaan isticmaalaa shaandhaynta cinwaan (ama MAC) si aan uga hortago in calaamadayda Wi-Fi la xado oo sidaa awgeed ay noloshu u dhibto kuwa lambarada ah ee doonaya inay xadaan shabakada bilaa-waayirka ah. Si kastaba ha noqotee, aaladaha sida AA Charger-ka badanaa waxtar ma leh marka tusaalaha, sumadda iyo / ama Chipset-ka kaararka shabakadda sida caadiga ah lagu aqoonsado cinwaankaas, sidaa darteed xitaa haddii ay qarinayaan cinwaanadooda dhabta ah ee MAC, beddelaadda MAC waxtar ma leh.
Waad ku mahadsantahay cadeynta shakigeyga.
kaadi haysta dijo
markaa waxaad leedahay shaandhaynta mac adoo ku dhejinaya macmiilka mac waxaad marin u yeelan kartaa shabakaddaada
Ku jawaab blad
Markaa waxaad ugu yeeraysaa "qashin-qubka" lammers-ka ... Waxay umuuqataa mid layaableh in qof garanaya adeegsiga nidaam Linux ah oo loo diyaariyay maamulka iyo maaraynta shabakada uusan ogayn in 3da qaybood ee uguhoreeya MAC ay yihiin kuwa ay tilmaameen soo saaraha iyo kan kale. 3 waa kala sooc ... Chipset-ka wuxuu daneeyaa kaliya koontaroolaha mana lagu muujiyo MAC, IP-ga waxaa u xilsaaray DHCP ama MANUAL marka wax shaqo ah kuma laha waxaad leedahay, waxyaabaha qaar hadii ay sameeyaan Waxaad umuuqataa inaad lammer tahay waxaa fiican inaad naftaada ogeysiiso, waxbarto kadibna aad wax wadaagto.
Looma baahna iimaan xumo, salaan waxaana rajeynayaa in faallooyinkaan ay kugu dhiirigelinayaan inaad horumariso aqoontaada.
dib uqabashada dijo
Way fiicnaan laheyd in laga sameeyo android 4.1 kuwa naga mid ah ee aan haysan kaarka wifi network wifi (runti, barnaamijyada sheegaya in sidan lagu sameeyo android waa qashin)
Ku jawaab backtrackattack
Dhibaatadu ma ahan midda 'android', adoo rakibaya terminaal isla markaana aad kombiyuutarka xididaysanayso, waad rakibi kartaa oo socodsiin kartaa barnaamijkan noocan ah.
Dhibaatada ka jirta taleefannada gacanta ayaa ah in kaararka Wi-Fi ay yihiin kuwo aasaasi ah, badankooduna ma oggola qaabka kormeerka ee lagama maarmaanka u ah adeegsiga barnaamijyadan.
Waxaan akhriyay meel, in S2 ay ku guuleysatay inay ku dhigto habka kormeerka ... laakiin ma garanayo halka ay ahaan lahayd.
PS: Ma bixin internetka muddo sanado ah.
Ibraahim T dijo
Xiiso aad u xiiso badan
Jawaab Ibraahim T
Sideen ugu rakibaa xirmooyinka iyo ku-tiirsanaanta Ubuntu 12.04? Waxaan ogaaday inaysan ku jirin meelaha lagu kaydiyo ...
Saaxiibka Google ... waxaa ka buuxa hagitaanno rakibid ah
Tilmaamaha rakibidda ayaa sabab u ah qof ayaa sameeyay, ma dhaawaceyso in wax la baro halkii laga heli lahaa xishood la'aanta bogga cashar bixinta qof u dir Google ...
Way fiicantahay in la ogaado sida aan u nugul nahay iyo sida ay u sameeyaan… iminkana, kuwa aan ogeyn sidoo kale.
Qoraal ku saabsan amniga ma xuma. Waan ogahay inaysan u qurux badnayn sida kuwa waxyeellada leh, laakiin waxay noqon laheyd "duubidda duubka."
@Jlcmux Tilaabada 1 waxaad si kadis ah u qortay "airom-ng" halkii aad ka "airmon-ng". Waan layaabay qofna ma dareemin, XD!
Haddiise shabakadu WPS ay shaqeysay, maxaa la sameyn karaa maxaa yeelay talaabooyinka lagu sharaxay boostada mar dambe ma shaqeyn doonaan.
Waxba, sii wad inaad isticmaasho hababka qaamuuska qaamuuska, xoog caayaan oo sug iyadoo ku xiran kakanaanta fure, gaar ahaan hadday tahay WPA2.
Iyo inbadan haddii lagu sifeeyo cinwaanada MAC.
Way iga qoslisaa inaan u maleeyo inaan had iyo jeer raadinno dhinaca xun ee dadka. Taasi waa sababta ay u yiraahdaan waa wax xun ama anshax xumo in la helo furayaasha wifi. Haddii aan isku deyno qorshahaas waxaan si fudud ugu qasbanaan lahayn inaan la soconno paranoia oo aan ka baqeyno qof walba maxaa yeelay, intaas ka dib, yaa aamini karnaa….
Haddii "xatooyada" ama "hacking" wifi ay xun tahay iyo in kale, waxaan u daynaynaa damiirka qof walba. Sidoo kale marka qof doorto inuu isticmaalo nooc ka mid ah tikniyoolajiyadda waa qasab in la is baro sida loo maareeyo tikniyoolajiyaddaas. Miyuusan qof iibsan baabuur u baahnayn inuu ogaado sharciyada taraafikada waddankooda (tan aasaasiga ah)? Mise waxay noqon kartaa inaan anigoo ah milkiile gaari aan lahayn wax mas'uuliyad ah ...
Markaad heleyso adeeg shay (wifi kiiskan) waa macquul in laga fikiro inay tahay inaan iska barinno nafteena sida looga gaashaaman karo weerarada noocan ah nidaamyadu ku dhici karaan.
Haddii ay yihiin dabeecad lambar saafi ah waa mid aad u dhakhso badan sida qaadashada WEP laakiin haddii ay tahay hexadecimal wax badan ayey qaadataa ... waxay noqon kartaa saacado.
Mahadsanid, waxaan tijaabinayaa shabakadayda wifi, waxaa ii soo baxday in markii horeba ay ikhtiyaar u leedahay oo aanan xitaa aqoon xD
Wanaagsan, waxaan ku sameynayaa tijaabooyin wifislax 4.6 ah oo shabakadeyda ah laakiin ma aqaano waxa dhacaya ee ay kuxirantahay router-keyga laakiin ma siinayo biin waxaanan heystaa wps firfircoon mana fahmin inaan isku dayay wifiway, wifislax, backtrack, kaliya taasi waxay la xiriirtaa router-keyga waxay qaadataa 1 ama 2 saacadood in biin aysan soo bixin, ma jiraa qof og waxa ay noqon karto?
Waad salaaman tahay, ma ii sheegi kartaa barnaamijyada aan u baahnahay inaan ku rakibo barnaamijkan maadaama aan arkay casharo dhowr ah oo aysan dhihin waxa lagu rakibo
LOOL! Maaha barnaamij, ee waa Nidaamka Howlgalka, qeybinta Linux-ku saleysan, tani waa muhiim maxaa yeelay horey ayey kuu sheegaysaa inaad adeegsan karto nooca LiveCD version
Tallaabada ugu horreysa waa: airmon-ng MAYA airom-ng tallaabada labaadna waxaad ku dhajisey dhammaan 'airmon-ng start wlan0, waa inay' ku mahadsantahay casharka iyo salaanta asxaabta Linux! 0 /
Waxaan sameeyay weerarkan deriskiina wuxuu ogaaday natiijada inay sababtay waxaan damiyay wps-ka. Waxa indhahaygu qabanayaan waa sidee buu ku ogaadey in la weerarayo? inta aan ogahay weeraradan waa kuwa qarsoodi ah. Waan baari doonaa tan: - /
Haa, taleefankayga gacanta waan ku sameyn karaa. Isbarasho. PIN-ka. ku xusan. loogu talagalay hel fure
Ku jawaab fulgencio
Movistar router, oo ka helaya, marka loo eego, cusbooneysiinta firmware ee shirkadda lafteeda, sababtoo ah haddii nidaamkani ku tiirsan yahay isticmaalaha, boqolkiiba cusbooneysiintu aad ayey u hooseysaa, dhowaan ayaa lagu cusbooneysiiyay qaab fudud oo looga hortago weerarkan. Ruter-ku wuxuu kaliya u oggol yahay tiro kooban oo isku day ah ka hor intaan la sii wadin tijaabinta, taasoo si weyn u dheereynaysa howshan, taasoo ka dhigaysa mid la doorbidi karo inay ku laabato qaabab dhaqameed si loo ogaado noocyadan furaha ah. Had iyo jeer ujeeddooyin waxbarasho iyo adigoon ku kicin nooc kasta oo fal sharci darro ah, dabcan;).
Saaxiibkey, iga raali noqo, ma ii soo diri kartaa barnaamijka bakteeriyada emailkeyga, maxaa yeelay mar hore ayaan ka raadiyey internetka waxaanan ka helay websaydhka rasmiga ah oo leh halkan ma joogto, hada waxaa jira kali caan ah laakiin aniga doonaya bakteeriyada
Ku jawaab abiu
Waan ka xumahay laakiin, BackTrack waa / wuxuu ahaa magaca distro loo adeegsaday, waxyaabo ay ka mid yihiin, shabakadaha hanti dhawrka (ama jebinta), kombiyuutarada, iwm.
Waqti ka hor way joojisay in loogu yeedho BackTrack waxaana loo yaqaan 'Kali', laakiin dhab ahaantii waa isku mid, waxay leedahay isku codsiyo, waxay u adeegtaa ujeedo isku mid ah, kaliya waxay badashay magaca.
Waa DVD, aan macquul aheyn in lagu diro emayl.
Soo dejiso Kali oo raac casharrada aad ka hesho shabakadda, iyaguna si isku mid ah ayey kuugu adeegi doonaan.
Anigu waxaan ahay qof laylis ah oo is baray waxan oo dhan waxaanan ogaaday in markii aan ku baarayo shabakadaha wps qufulku uusan i siinaynin natiijooyin, laakiin waxaan ognahay inay jiraan sababtoo ah saaxiib ayaa ka dhigay inuu la shaqeeyo laptop-kiisa waana u shaqeeyay isaga. Ma ogtahay fursadaha kale ee ay noqon karto?
Ku jawaab niozeka
Kaliya inaan ka faaloodo arintan dadka aan ku raacsaneyn ku xadgudubka shabakadaha deriska, waxaan rabaa inaan u sheego in dhanka anshaxa laga eego, waxa saxda ah waa in qof walba uu iska bixiyo adeegiisa internetka si uusan u helin si aan ugu xado deriska, nasiib daro wadamada qaar dad badan ayaan fursad u helin in ay shaqaaleeyaan adeegyadan oo kale, waxaan ka mid ahaa dadkaas muddo dheer, nasiib wanaag ilaahay mahadiis waxaan helay shaqo hufan waana helay habka loo bixiyo adeegga la sheegay, hadda si wanaagsan mudane, haddii aqlabiyadda ku jirta golahan ay tahay inay iska bixiyaan adeeggooda, adiga ayay kuu fiican tahay, laakiin fadlan si xun ha uga sheegin naftaada kuwa aan haysan suurtagalnimada inay taas sameeyaan, maadaama hubaal ma ogid waxa lagama maarmaanka ah iyo waxyaabaha qofku u baahan yahay inuu ku noolaado adduunkan oo qaali ku sii noolaanaya.
laakiin qalabkan vps waa naafo sida aad ku sameyso mid karti leh
Waxaan aqriyay faallooyin badan (oo aan aheyn dhammaan) fekerkeygana waa in hadii qof uu leeyahay Wi-Fi, waxaan ku shubey gurigaaga Wi-Fi, wuxuu kusoconayaa booskaaga Mawjadaha rf si joogto ah ayey kuu marayaan, hadii aad qeexdo Deji ama adeegsi u ah calaamaddaas, soo dhawow noqo. Tusaale ahaan, GPS-ku saddex-jibbaarista GSM waligaa ha bixin adeeg, laakiin ka faa'iideyso shucaaca RF-ka ee kuwa ku celceliya GSM Waxa aan doonayo inaan ku gaadho ayaa ah in xatooyada Wi-Fi aysan waligeed noqon doonin mid sharci darro ah umana muuqato fal dambiyeed ama sharaf dhac ah aniga. Waxaan rajeynayaa in ra'yigeygu ku caawin doono
Waxaan u maleynayaa inaad la mid tahay adiga Roberto. Muddo sanado ah astaamahaas ayaa la dhigayay gurigeyga meel kasta oo aan u guuro ... waana ka faa'iideysanayaa them
Salaan kadib, waxaan u fuliyay dhamaan tilaabooyinkaaga ilaa heerkulka, markii aan fulinayay amarka «reaver -i mon0 -b (bssid) -c (channel) -vv» xirmooyinku way bilaabmayaan laakiin wali wey ku sii jiraysaa: »[+] nalka laga bilaabo «(HADAAD MAC)»
Ma jiraa qof og sababta?
Saaxiib, maydhashada ama amarka dib-u-celinta midna aniga ima shaqeeyo, waan hubaa inaan u baahanahay inaan wax rakibo, fadlan ka caawi, mahadsanid ka hor
maxaa ka daran?
Helitaanka calaamadaha hawada ma xuma, waxaa ka sii daran in la bixiyo addoon ahaan nolosha, sax?
Ku soo jawaab demapepe
ku darsiga wanaagsan ee sayniska
Aniga ahaan ma dhacayso in ilayska beenta laga daawado halkaas ayay ku sii jirtaa maxaa yeelay way ahaan doontaa
Aan aragno ... Markaa suurtagal ma tahay in furaha WPA laga helo modem leh WPS? Taasi suurta gal ma tahay? Miyayna muhiim tahay in qofka aad weerareyso iyo haddii kale uusan riixin badhanka WPS?
Waan jeclahay xatooyada wifi kaliya xatooyada halkaas ayaan ku dhaafnay bil ka hor waxaan sugayaa intarneetka in la rakibo, waxaan ubaahanahay internetka waana jeclahay xatooyada wifi Hahaha
Waxay u shaqeysaa sifiican hada waxaan haystaa internet bilaash ah ^^
Ku jawaab kender
Aad baad ugu mahadsantahay tilmaanta cad. Berri waxaan balan qaadayaa inaan kuu sheego sida ay wax u dheceen.
Waxay leeyihiin MAD !!! dijo
Waxaan ku tijaabinayey Reaver-ka Linux VM muddo bil ka badan oo leh shabakado badan oo Wi-Fi ah oo igama jabin gabi ahaanba.
Kujawaab Waxay dhahaan MAD !!!
Xoogaa goor dambe oo xD ah, way adagtahay in la sameeyo weerarada WiFi iyada oo loo marayo mashiin dalwad ah, waxa ugu fiican ayaa ah (waxaana rajeynayaa inaad sameysay) si aad isugu daydo usb nool oo marin u leh kaarkaaga shabakada
Ka dib markii aan sameeyay weerarkan, sideen wifi-kayga dib ugu daartaa? mise waxay tahay inaan dib u bilaabo kumbuyuutarkayga?
Talaabooyinka lagu abuurayo LiveCD - DVD - USB laga bilaabo xoqida Debian iyo waxyaabaha ka dhasha.